Ndinowana sei masaiti akavharika online mahara, chero kupi? | la-manette.com
Endai kune zvakagadzirwa
ZVIYEDZO UYE ONGORORO
MAZANO UYE MATINJI
NDEUPI MUTONGI WEKUSARUDZA
Ndinowana sei masaiti akavharika online mahara, chero kupi?
18 novembre 2021 ndima Seymour Doiron
Mhosva dzekuvhara webhusaiti dziri kuwedzera gore rega rega nekuda kwezvinhu zvakawanda. Munyika dzakawanda, nekuda kwekuwedzera kwekuongorora, hurumende dziri kushingaira kuongorora kuwanikwa kweinternet uye kumanikidza vashandisi kuti vasaende kure nemawebhusaiti ane mukurumbira uye masocial network. Mhosva dzakafanana dzinoitikawo muzvikoro nemahofisi uko maneja maneja anotimanikidza kutsvaga nzira dzekuvhura mawebhusaiti.
Muchikamu chino, iwe uchadzidza nezve akati wandei nzira dziri nyore dzekunzvenga censorship uye kuwana akavharika mawebhusaiti. Idzi nzira dziri nyore kushandisa uye dzinoshanda dzinosanganisira kushandiswa kwe VPN, kuwedzera, kubira DNS, mawebhusaiti proxy, Etc.
Zvichikosha: Kana hofisi yako (kana chikoro) yakarambidza mamwe mawebhusaiti panetiweki yayo, kuvasunungura kunogona kutyora mutemo wako webasa. Naizvozvo isu hatikurudzire kuti uedze kupfuura mafirita mune idzi kesi.
Maitiro ekuvhura mawebhusaiti?
1. Shandisa VPN kuvhura nzvimbo dzepamhepo
Sezvinoratidzwa nezita racho, VPN (Virtual Private Network) software inoita sedanda rekuvanda iro risingaratidze yako chaiyo IP kero. Paunoshandisa VPN, traffic yemudziyo wako inoenda neVPN server isina kuvharwa nehurumende kana ISP, ichikubvumidza kuti utarise mawebhusaiti.
Muchiitiko chedu uye maonero enyanzvi, kushandisa yakavimbika VPN sevhisi ndiyo nzira yakanakisa yekuvhura mawebhusaiti zviri nyore. Ese maVPN ane mukurumbira ane maapplication avo eWindows, macOS, Android, iOS, Linuxnezvimwewo, zvinoita kuti zvive nyore kuvhura masaiti kubasa kana kuchikoro.
Kana iwe uchida kunyura zvakadzika, unogona kutarisa yedu yakadzama chinyorwa pa akanakisa VPN masevhisi. Heano mamwe akanaka VPN zvirongwa zvaunogona kuedza:
Kana chepamusoro-notch chengetedzo isiri iyo chinangwa chako chikuru, unogona zvakare kuedza emahara VPN masevhisi kuvhura akavharika masaiti.
2. Webhusaiti unblocker: Shandisa proxy webhusaiti
Kazhinji munzvimbo yehunyanzvi, vashandirwi vanoisa mimwe miganho yekurambidza kupinda kwako kune mamwe mawebhusaiti uye masevhisi akadai kumhanyira vhidhiyo, masocial network kana kunyange maemail emunhu. Dzimwe nguva unoda nzira yekuwana mawebhusaiti akavharika, uye mumamiriro ezvinhu aya mawebhusaiti eproxy anoita senzira yekudzokera shure.
Nekudaro, cherechedza kuti unblock proxy haina kuchengetedzeka seVPN. Naizvozvo, kana iwe uchida kuchengetedza basa rako chakavanzika, Method 1 ndiyo yekusarudza.
Padandemutande, kune mazana emawebhusaiti evamiriri anobvumidza iwe kuve ne "zvisina kuganhurirwa" ruzivo rwewebhu. Webhusaiti yeproxy inovhara saiti yakavharwa kubva kuISPs uye inobvumidza iwe kuti uwane yakavharika mawebhusaiti.
Semuenzaniso, kana Facebook yakavharwa nesangano rako, unogona kuenda kune proxy saiti uye woisa iyo yakavharwa URL kuti uwane iyo sevhisi.
3. Svika masaiti akavharika muChrome
Zvinogoneka zvakare kuti Chrome yakavharira imwe webhusaiti pakombuta yako, kana mumwe munhu akaigadzira kuti iite kudaro. Muchiitiko ichocho, pane matanho ari nyore aunogona kutora kuti uchinje marongero chaiwo kuti ubvumire kupinda kune iyo webhusaiti.
Kuti uvhure mawebhusaiti mumamiriro ezvinhu akadai, isa kero yewebhu webhusaiti muChrome uye kuruboshwe rwekero bar, ona chiratidzo. Dzvanya pairi uye tsvaga zvigadziriso zvesaiti kuti uchinje iyo inovharira mamiriro.
Verenga zvakare: 11 akanakisa emahara mutyairi anogadziridza maturusi
Kana uine dambudziko rekushanya YouTube, verenga maitiro ekuvhura YouTube uye yedu yakatsaurirwa YouTube gwara rekugadzirisa dambudziko.
4. Shandisa IP pane URL
Vazhinji venyu hapana mubvunzo kuti munoziva kuti webhusaiti yega yega URL ine IP kero, uye zviremera zvinovharira saiti inogona kunge ichangonyoresa URL pane IP. Muchiitiko ichi, unogona kushandisa IP kero yewebhusaiti kuvhura mapeji ewebhu akarambidzwa muChrome browser yako.
PaWindows, nyora tracert websitename.com mune yekuraira kuti uwane iyo IP kero.
PaMac, vhura Network Utility> tinya pane iyo Traceroute sarudzo kumusoro uye isa iyo webhusaiti kero kuti uwane yayo IP kero.
Ye iPhone ne Android, tsvaga mapurogiramu ane zita reTraceroute paApp Store uye Play Store.
PaLinux, nyora dig websitename.com muTerminal kuti uwane IP kero.
5. Shandisa Google Translate
Dzimwe nguva masangano kana nyika hadzirambidze Google Translate. Pamwe nekuti chishandiso chekudzidzisa, uye hapana anozviona seine simba rakakwana rekuvhura mawebhusaiti kuchikoro kana muhofisi. Saka, nemudziyo uyu, unogona kudarika chirambidzo nekushandura webhusaiti yakavharwa kune mumwe mutauro waungave uchijairana nawo.
Edza Google Translate uzvionere wega; ingonamira url wobaya url inobuda muchikamu chakaturikirwa.
6. Bypass censorship pamwe nekuwedzera
Kana mawebhusaiti akavharika ane simba mune zvakasikwa, seFacebook kana YouTube, iwe unofanirwa kuyedza aya ekuwedzera. Hola uye ProxMate mawedzero aunogona kushandisa kuwana akavharika mawebhusaiti paChrome uye mamwe mabhurawuza. UltraSurf ndeimwe yeaya anobudirira ekuwedzera ayo anokuita kuti uongorore wakasununguka uchishandisa yayo encrypted proxy network. Iine simba rakakwana rekukunda firewalls.
7. Tsiva yako DNS server (Custom DNS)
Takatokurukura nzira iyi mune imwe nyaya yakaparadzana inonzi DNS Hack. Iwe unogona kungoshandisa nzira iyi uye nekunzvenga block. Iyi nzira inowanzo sanganisira kushandisa Google DNS kana OpenDNS kuwana Indaneti. Heano matanho akadzama eiyi nzira.
Cloudflare's 1.1.1.1 DNS sevhisi inoti ndiyo inokurumidza uye inoshamwaridzana neDNS sevhisi. Cloudflare yakaitawo kuti 1.1.1.1 DNS service iwanikwe kuburikidza neAroid uye iOS apps. Ini ndinowanzo shandisa nzira iyi yekudzvanya-kamwe kuwana nzvimbo dzakavharika munzvimbo yangu.
Verenga zvakare: Maitiro ekumisikidza A2F paChinja: gadzira maviri-chinhu kusimbiswa kweNintendo Account?
8. Enda kuInternet Archive - Wayback Machine
Wayback Machine ibasa rinonakidza rinochengeta kopi yeanenge ese webhusaiti paInternet. Inochengetedza akawanda mavhezheni ewebhusaiti, uye unogona kuishandisa kuwana shanduro dzekare dzewebhusaiti. Vashandisi vanogona kuishandisa zvakare kutarisa zvakavharika zvemukati online.
Saka kunyangwe kana sevhisi kana webhusaiti ikashaikwa, iyo Wayback Machine yakakufukidza. Mukuwedzera, iyo Internet Archive inewo akawanda mafirimu emahara, zvinyorwa, nostalgic mitambo, ebooks, nezvimwe.
9. Shandisa webhusaiti yeRSS feed
Vaverengi veRSS vanobatsira kuwana zvinyorwa zvitsva uye kuzviverenga zviri nyore. Unogona kubata RSS feed kubva pawebhusaiti yakavharwa uye woiwedzera kumuverengi wako. Dambudziko nderekuti vamwe vaverengi veRSS vanogona kurodha peji rese rewebhu kumusoro kweUI yavo, iyo inogona kushandiswa kuwana yakavharwa webhusaiti.
10. Shandisa TOR (The Onion Router)
Kana iwe uri mumiriri wekuvanzika, unogona kunge uchitoziva iyo yakambozivikanwa Tor browser. Izvi zvinogona kushanda sewebhusaiti blocker bypass chishandiso kana iwe ukachigadzirisa nemazvo. Muzviitiko zvakawanda, unogona kuvhura mawebhusaiti kuchikoro kana muhofisi uchiramba usingazivikanwe. Kubatsirwa kwakapetwa kaviri sezvo iwe uchigona zvakare kubvisa chero nzira yekutarisa.
Mushure meVPNs uye proxies, Tor ndiyo yakanyanya simba nzira yekuvhura masaiti. Inoshandiswawo senzira yekuenda kunzvimbo dze rima webhuzha, kana .onion nzvimbo, iyo yakavharwa pawebhu yako yenguva dzose. Unogona kuverenga yedu yakadzama chinyorwa paTor kuti udzidze zvakawanda nezve maitirwo ayo.
Zano: Shandisa Tor uye VPN: Kunze kwekupfuura mawebhusaiti blockers, kana iwe uchitsvaga nzira dzekuvandudza kuchengetedzwa kwekombuta yako, unogona zvakare kuenda kune inouraya musanganiswa weTOR neVPN. Mazhinji maVPN, seNordVPN, anopa tekinoroji senge Onion Pamusoro peVPN, iyo inopa imwe nhanho yekudzivirira.
Dzimwe nzira dzisina kujairika dzekuvhura mawebhusaiti online
1. Shandura Internet network
Mazhinji ISPs anopa vashandisi ane simba IP kero, iyo inochinja nguva dzose. Saka zvinogoneka kuti muridzi webhusaiti akavharira IP yako kero kwenguva yakati. Muchiitiko ichi, unogona kuwana iyo yakavharika saiti nekutangazve yako Wi-Fi router kumanikidza ISP kukupa imwe IP kero.
Imwe nzira iri nyore yekutenderedza zvirambidzo ndeye kushandisa yako smartphone network yekumba kana network yako maneja akavharira mamwe masevhisi. Kunyange iyi nzira isiri 100% yekupusa, inonakidza uye yepamutemo imwe nzira yekutyora mitemo muhofisi.
2. Shandisa HTML kuPDF converter
SodaPDF inopa yemahara sevhisi yepamhepo iyo inogona kukubatsira kudhawunirodha peji rewebhu zvakanangana nekombuta yako usina kana kuriwana. Ingoshanyira iyi link uye isa iyo yaunoda URL. Ndizvo zvose. Kune mamwe mawebhusaiti blocker bypass masevhisi eHTML kune PDF anoshandura aunogona kuedza.
Verenga zvakare: Yakanakisa controller yekutamba FORTNITE MOBILE - Android uye iOS [Pamusoro 8] 2020
Mamwe masevhisi anoda URL yako uye ingotumira iyo isina kuvharwa peji rewebhu. Pakazere, iyi inzira iri nyore yekuvhura webhusaiti pasina proxy kana VPN.
3. Shandisa Firefox kubva paUSB stick
Kana chikoro chako kana hofisi ichizivikanwa kutora matanho ekurambidza kupinda kune masaiti, ini handingashamise kana iwe usingatenderwe kuisa ekuwedzera pawebhu browser kuvhura mawebhusaiti ekushandisa kwako wega. Mune ino kesi, unogona kuisa inotakurika web browser seFirefox pane USB tsvimbo. Patanidza neyakanaka yekuvhura proxy sevhisi, uye iwe unayo zvese.
4. URL redesign nzira
Dzimwe nguva imwe webhusaiti inobatwa muVPN uye haina yakasimbiswa SSL chitupa. Kune aya mawebhusaiti, unogona kungoenda kubhawa kero yewebhu browser yako woedza kutaipa https://www.url.com, pane kuenda kuwww.url.com kana https: // www.url.com. Kugadziridzwa uku kunogona kukonzera kuratidzwa kwechiziviso chekuchengetedza. Tinya pane Proceed Anyway sarudzo uye shanyira webhusaiti. Iyi nzira haisi yebenzi, asi inogona kuuya inobatsira dzimwe nguva.
5. Shandura network proxy mumabrowser
Yunivhesiti yako kana Institute inogona kunge iine anopfuura imwechete proxy kune network yayo. Saka, mamwe mawebhusaiti anogona kuganhurirwa pane imwe proxy, asi inowanikwa pane imwe. Unogona kuedza kusefa neproxy kuti uwane mawebhusaiti akavharika panzvimbo yako.
Kudzima zvigadziriso zveproxy network mubrowser yako harisi basa rakaoma. Iwe unongoda kuwana iyo yekubatanidza / network sarudzo mune yako web browser marongero. Ikoko iwe unogona kusarudza iyo sarudzo isina proxy kana kushandisa imwe yakasiyana inobvumira kusingabvumirwe kubhurawuza munzvimbo yako. Semuenzaniso, heino hwindo rezvigadziriso rinoratidza machinjiro aungaite marongero muFirefox web browser:
Aya ndiwo mamwe anonyanya kushanda uye ari nyore kushandisa nzira dzekunzvenga censorship inorembera pamusoro peako aunofarira mawebhusaiti. Tizivise kuti ndeipi yaunoda kuti uwane mawebhusaiti akavharika munharaunda yako.
Mupepeti chez kure
Seymour munyori pa la-manette.com, anofukidza ese maficha eiyo indasitiri yemitambo, varaidzo yepamhepo uye pop tsika zvachose. Iine nhoroondo munyika yeGaming, Seymour akabatsirawo kudzidzisa akati wandei vagadziri vemukati. Unogona kubata Seymour pa [email inodzivirirwa]
Zvinyorwa zvitsva naSeymour Doiron (ona zvese)
5 yakanakisa yemahara audio converter software - Zvita 16, 2021
Heano maitiro ekubvisa nhoroondo yekuona yeNetflix - Mbudzi 18, 2021
Ndinowana sei masaiti akavharika online mahara, chero kupi? - Mbudzi 18, 2021
Dzimwe nzira dzeYfy ~ Dzakanakisa dzimwe nzira dzeYTS
Heano maitiro ekubvisa nhoroondo yekuona yeNetflix
Leave mhinduro Cancel mhinduro
Sevha zita rangu, email, uye saiti mubrowser kune yangu inotevera chirevo.
Chikwata chedu chinoti Mazvita!
Nzvimbo yedu inotsigirwa nevateereri vayo. Paunotenga kuburikidza nezvinongedzo pane yedu saiti, tinogona kuwana komisheni diki pasina muripo wekuwedzera kwauri.
Moon Knight trailer yakaziviswa yeNFL Super Wild Card mutambo nemifananidzo mitsva
Imbwa dzinoyevedza dzePupperazzi dzinokutevera kusvika wadzida
Foni yeGoogle inonzi inopeta inogona kunzi Pixel Notepad
Apple inogona kunonoka AR/VR headset zvirongwa kusvika 2023: Bloomberg
Nvidia CFO inotarisira kupihwa kweGPU kuvandudza muhafu yechipiri ye2022
Zvivi Zvinomwe Zvinouraya: Grand Muchinjikwa iri kubatana neakakurumbira anime Re: ZERO for a crossover event.
Splatoon 2: matipi uye matipi - maitiro ekutamba online neshamwari
Minecraft Pocket Edition - Iyo Yekupedzisira Redstone Gwaro (Zvishandiso)
South Park: Muparadzi Wefoni - Mazano & Manomano - Kuvaka Iyo Yakanakisa Deck
Roblox Catalog - 10 Legendary Zvinhu
Yese Star Tower Defense Codes (Ndira 2022)
Shindo Hupenyu makodhi kuti uwane spins uye mabhonasi: Ndira 2022
Cookie Run: Kingdom: Redemption Code List
Skip-Bo mutambo wemakore makumi mashanu nematatu ekare, wakavandudzwa naMattel53 mbozhanhare.
Unoda shamwari dzeMhuka Kuyambuka: New Horizons Multiplayer? Govera shamwari yako makodhi uye makodhi eDodo pano!
Iyo 10 yakanakisa adventure mitambo
Mitambo gumi yepamusoro yakavhurika yenyika
Ekutanga gumi nemashanu ekurodha pasi paSwitch eShop yemwedzi waZvita 15.
[Ongororo] Hupenyu Hunoshamisa: Chokwadi Mavara
Deltarune yekuvandudza yekuvandudza uye nyowani Chitsauko 2 preview yakaratidzwa
Shamwari yangu Peppa Nguruve yakazivisa Chinja
Vagadziri veMario naLuigi vanotsanangura kuti sei kutsva kusingawanikwe paChinja
Atlus haana kukanganwa Etrian Odyssey uye chirongwa chitsva chakaziviswa.
Agent mitambo iri kuramba ichiwedzera digitaalinen
Iyo yakanakisa PS1 mitambo yenguva dzese
Mazano uye matipi eFortnite yako yekushanya!
Chengetedzo, Kuvanzika uye Cookies
MUDZIMAI © -2022
KUCHENGETEKA, KUVANZIKA UYE MAKUKI
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kunatsiridza ruzivo rwako. Tichafunga kuti wakanaka neizvi, asi unogona kusarudza kubuda kana uchida. Cookie settingsBVUMA UENDERERERE mberi
Iri webhusaiti rinoshandisa makiki kuti uvandudze ruzivo rwako paunenge uchitenderera kuburikidza newebsite. Kunze kwekikiki, makiki anongororwa sezvakakosha anochengetwa pa browser yako sezvaari inokosha pakushanda kwezvinhu zvinokosha zvewebsite. Isu tinoshandisa cheki-party cookies iyo inotibatsira kuongorora uye kunzwisisa kuti iwe unoshandisa sei webhusaiti ino. Aya makiki achachengetwa mu browser yako chete nemvumo yako. Iwe unayowo sarudzo yekubuda-kunze kwekiki. Asi kubuda mune zvimwe zvekiki kunogona kuva nemigumisiro pane zvakaitika kwauri.
Sevha & Shandisa